ExifTool: tarisa iyo EXIF ​​dhata yemifananidzo yako kubva kune iyo terminal | Linux Vakapindwa muropa
ExifTool: tarisa iyo EXIF ​​dhata yemifananidzo yako kubva kune iyo terminal
Nekufamba kwenguva iyo kamera Vanga vachiwana zvakawanda mune zvavanogona uye dudziro yavo iri kuita zvirinani uye zvirinani, asi chokwadi ndechekuti pamwe chete nazvo izvozvi zvese -kunyangwe zvakachipa- vanotora yakawanda yakawanda yekuwedzera ruzivo, iyo yavanochengeta muchimiro che metadata, inowanzozivikanwa se EXIF ruzivo.
Ruzivo urwu runogona kutariswa nechero muoni wemufananidzo, asi sezvo isu tichiziva kuti vateveri veLinux vanosarudza kuita zvavanogona kubva pamutsetse wekuraira, tichaenda kuratidza maitiro ekuona iyo EXIF ​​ruzivo rwechero mufananidzo kubva kumagumo, nekuda kwechishandiso senge ExifTool (iyo nenzira, inowanikwawo paWindows uye Mac OS X).
Icho chikumbiro chinotibvumidza isu ona metadata yenhamba huru yemafomati emifananidzo, senge AWR, ASF, SVG, TIFF, BMP, CRW, PSD, GIF, XMP, JP2, JPEG, DNG, uye mamwe mashoma. Uye kana ari mafomati edata metadata tinogona kutaura nezveEXIF, GPS, IPTC, XMP, Kodak, Rico, Adobe, Vorbis, JPEG 2000, Ducky, QuickTime, Matroska uye DjVu pakati pevamwe.
Kutanga, isu tinofanirwa kuisa chishandiso ichi, icho, sezvazvinoitika zvese, zvinoenderana nekuparadzira kwatinoshandisa. Kune vashandisi ve Debian, Ubuntu kana Linux Mint:
Kune vashandisi veFedora kana CentOS:
Ipapo, kutarisa iyo EXIF ​​ruzivo rwe chero faira iri nyore sekuita:
Izvo zvinoburitsa chimwe chinhu chakafanana nemufananidzo wepamusoro unofambidzana neichi posvo, asi ndirwo rwakazara ruzivo rwatinopihwa nechikumbiro. Kune rimwe divi, kana tichida kuona data reGPS tinoita chimwe chinhu senge:
Tinogona zvakare kugadzirisa zita remunyori wechifananidzo:
Mamwe mashoko - Debian anokurukura achishandisa default XFCE desktop
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » ExifTool: tarisa iyo EXIF ​​dhata yemifananidzo yako kubva kune iyo terminal
Arch Linux 2013.11.01 inowanikwa kurodha pasi